स्कुलले कति शुल्क लिने? बुटवल उपमहानगरले तोकिदियो, अब यसरी हुनेछ पढाइ
कृष्ण मल्ल बुटवल - बुधबार, भदौ ३१, २०७७
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १९ मा ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ परिमार्जन गरी पुनः जारी गरेको
निर्देशिकाले विद्यालय शिक्षाको पठनपाठन कसरी गर्ने भन्ने विषय खुलाएको छ भने सिकाइ सहजीकरण गरेवापत स्थानीय तहको स्वीकृतिमा मात्रै निर्धारण गरेको शुल्क निजी स्कुलले लिन पाउने उल्लेख छ।
यस निर्णयलाई कतै संघीय सरकारले विद्यालय सञ्चालनको समस्या स्थानीय तहलाई दिएर आफ्नो टाउको हलुका पारेको बहस पनि चल्न थालेको छ भने कतै शुल्क निर्धारण र विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको हुँदा त्यसैअनुसार भएको अर्थात् स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरेको सकारात्मक चर्चा पनि छ।
यी चर्चा, शिक्षा क्षेत्रमा संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका विगतका घटनाबाटै विकसित भएका हुन्।
सहजीकरण निर्देशिका र संघीय सरकारले भदौ १९ मा गरेको निर्देशनसँगै स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको गतिविधि बढाउने संकेत देखाएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि त्यसको तयारी अगाडि बढाएको छ।
उपमहानगरको भनाइ सापटी लिने हो भने असोज १ देखि बुटवलमा विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधि बढ्छ। तर त्यो गतिविधि संघीय सरकारले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार हुनेछ।
सहजीकरण निर्देशिका जारी भएसँगै उपमहानगरको नगर शुल्क निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको सहजीकरण शुल्कलाई नगर शिक्षा समितिको बैठकमार्फत पारित गरेको छ। त्यसैगरी नगरभित्रका सबै बालबालिकालाई कसरी सिकाइमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गरिएका छन्।
यो कदमपछि नगरका सबै बालबालिकासम्म सिकाइ क्रियाकलाप पुग्ने गरी योजना बन्ने र पुग्ने कुरामा उपमहानगरपालिका आसावादी देखिन्छ।
विद्यालयगत विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण योजना
त्यसका लागि विद्यालयहरूले केही प्रक्रियासाथ विद्यालयको एकमुष्ठ सहजीकरण योजना निर्माण गर्ने र उपमहानगरले उक्त योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने जनाएको छ।
त्यसका लागि शिक्षकहरू अनिवार्यरूपमा असोज १ देखि विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने भनिएको छ।
पहिलो कदमका रूपमा सरकारले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई आधार मानेर विद्यालयले आफ्ना विद्यालयका सबै शिक्षकको जिम्मेवारी तोकेर कार्य विभाजन गर्नेछन्।
दोस्रो कदमका रूपमा शिक्षकको कार्य विभाजनसहित विद्यालयले एकमुष्ठ सिकाइ सहजीकरण योजना निर्माण गरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा बुझाउनेछन्।
तेस्रो कदमका रूपमा विद्यालयले पेस गरेको सहजीकरण योजना उपमहानगरले थपघट गरी स्वीकृत गर्नेछ।
चौथो कदमका रूपमा विद्यालयले स्वीकृत सहजीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ।
पाँचौं कदमका रूपमा उपमहानगरले विद्यालयले तयार गरेको सिकाइ सहजीकरण योजना कार्यान्वयमा सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन भए/नभएको सुक्ष्मरूपमा अनुगमन गर्नेछ।
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण शुल्क निर्धारण
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा गत शैक्षिक सत्रमा गरिएको शुल्कलाई आधार मानेर उपमहानगरको नगर शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारण गरेको छ।
उपमहानगरले भने दुई किसिमले शुल्क निर्धारण गरेको छ। बुटवलले निजी विद्यालयलाई असार, साउन र भदौ महिनाको शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत र असोजदेखि ७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन दिने निर्णय गरेको छ।
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को दफा ३० मा भएको व्यवस्थाअनुसार नगर शिक्षा समितिको बैठकले विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क निर्धारण गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले शिक्षक र कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब सुविधा नघट्ने सर्तमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको बताए।
उनका अनुसार असार, साउन र भदौमा सिकाइ सहजीकरणमा भाग नलिएका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भने विद्यालयले पनि ६० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने छैनन्। तर असोजदेखि भने सबै बालबालिकालाई विद्यालयले सहजीकरणको योजना बनाइ पठनपाठनका क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुने विद्यार्थीबाट मात्रै विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेछन्।
जुनसुकै माध्यमले सिकाए पनि विद्यार्थीसँग शिक्षक नजोडिए शुल्क लिन नपाइने खनालले बताए।
मासिक शिक्षण शुल्कबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप, यातायात, विज्ञान, कम्प्युटर, पुस्तकालयलगायत शुल्क सहजरूपमा विद्यालयमा विद्यार्थी भौतिक उपस्थित नभएसम्म लिन नपाइने खनालले बताए। तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए र अरू शीर्षकमा शुल्क उठाए उपमहानगरले कारबाही गर्ने जनाएको छ।
कुन वर्गको स्कुलले कति कक्षाको शुल्क कति उठाउन पाउने?
उपमहानगरले शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि संस्थागत विद्यालयतर्फ श्रेणी र तहअनुसार शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस शुल्कका आधारमा उपमहानगरले प्रतिशतमा तोकेर सहजीकरण शुल्क निर्धारण गरेको छ।
उपमहानगरका अनुसार ‘क’ वर्गका विद्यालयका लागि पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षण शुल्क १ हजार ८ सय ४५, प्राथमिक तह (कक्षा १–५) लाई २ हजार ५०, निमावि तह (कक्षा ६–८) लाई २ हजार ४ सय ४३ र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) लाई ३ हजार १ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ।
‘ख’ वर्गका विद्यालयका लागि पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षण शुल्क १ हवा ५ सय ८, प्राथमिक १ हजार ६ सय ७६, निमावि १ हजार ९ सय ७० र माध्यमिकलाई २ हजार ५ सय ९७ छ।
त्यसैगरी ‘ग’ वर्गको विद्यालयका पूर्वप्राथमिक तहलाई १ हजार ३ सय ३०, प्राथमिक १ हजार ४ सय ७८, निमावि १ हजार ७ सय ४९ र माध्यमिक तहको २ हजार ३ सय २५ छ।
उपमहानगरको असार, साउन र भदौको ६० प्रतिशत सहजीकरण शुल्क लिने निर्णयअनुसार ‘क’ वर्गको पूर्वप्राथमिक तहलाई १ हजार १ सय ७, प्रावि १ हजार २ सय ३०, निमावि १ हजार ४ सय ६५ र माविको १ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ शुल्क उठाउन पाउनेछन्।
त्यसैगरी ‘ख’ वर्गको पूर्वप्राथमिक तहको ९ सय ४, प्रावि १ हजार५, निमावि १ हजार १ सय ८२ र माविको १ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ उठाउन पाउनेछन्।
‘ग’ बर्गको पूर्वप्राथमिक तहको ७ सय ९८, प्रावि ८ सय ८६, निमावि १ हजार ४९ र माविको १ हजार ३ सय ९५ शुल्क उठाउन पाउनेछन्।
असोजदेखि ७५ प्रतिशत सहजीकरण शुल्क लिने निर्णयअनुसार ‘क’ वर्गको पूर्वप्राथमिक तहको १ हजार ३ सय ८३, प्राविको १ हजार ५ सय ३७, निमाविको १ हजार ८ सय ३२ र माविको २ हजार ३ सय ८५ उठाउन पाउनेछन्।
‘ख’ वर्गको पूर्वप्राथमिक तहको १ हजार १ सय ३१, प्रावि १ हजार २ सय ५८, निमावि १ हजार ४ सय ७७ र माविको १ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ उठाउन पाउनेछन्।
‘ग’ बर्गको पूर्वप्राथमिक तहको ९ सय ९७, प्रावि १ हजार १ सय ८, निमावि १ हजार ३ सय ११ र माविको १ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ सहजीकरण शुल्क उठाउन पाउनेछन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा सामुदायिक ३८ र संस्थागत ५८ गरी ९६ विद्यालय छन्।
सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन निराशाजनक
सरकारले गत असार १ देखि जेठ १८ भित्र सहजीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको थियो। निर्देशिकामा पनि सहजीकरणका पाँच विधि नै तोकिएको थियो। तर, बुटवल उपमहानगरपालिकामा यसको कार्यान्वयन त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन।
सामुदायिकभन्दा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सहजीकरणका विधि अनलाइन कक्षा केही बढी प्रभावकारी सञ्चालन गरे पनि समुदायस्तरको सिकाइ केन्द्र सञ्चालन र घरदैलो पुगेर सहजीकरण गर्ने काममा भने सामुदायिक विद्यालय अगाडि रहेको देखिएको छ।
उपमहानगरमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय दुवैलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दा कक्षा १–५ मा २० प्रतिशत, ६–७ मा ४० र ८–१० मा ५५ प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै पहुँच पुगेको छ । यसबाट अझै पनि धेरै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणमा आउन नसकेको देखिन्छ।
विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयले निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार भौतिक दुरी कायम गरी पठपाठन गराउनसमेत सक्ने व्यवस्था छ ।
समुदाय र स्कुलमा विद्यार्थी सिकाइ केन्द्र
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ मा सहजीकरणका लागि पाँच विधि उल्लेख गरिएका छन्।
निर्देशिकामा पहिलो सहजीकरण विधिमा सबै किसिमका पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थी समूहका लागि प्रिन्ट सामग्रीका साथै घर र समुदायमा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी सहजीकरण गर्ने प्रावधान छ। यो भनेको पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले पुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री घरमै उपलब्ध गराएर पढाउने हो।
त्यसैगरी तेस्रो विकल्पका रूपमा टेलिभिजन पहुँचमा रहेका विद्यार्थी समूहका लागि टेलिभजन कक्षा हो।
चौथो, कम्प्युटर भएको तर इन्टरनेट सुविधा नभएका विद्यार्थी समूहका लागि अफलाइन सामग्री, जस्तै पेन ड्राइभ, सिडी, हार्डडिस्कमा सामग्री उपलब्ध गराउने हो।
ती सहजीकरणका विधिका साथै त्यसका विकल्पका अन्य विधि अवलम्बन गर्ने भए विद्यालयले आफ्नो योजनामा राख्न बुटवल उपमहानगरले विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ।
तर, अहिले पनि अनलाइन कक्षामा पहुँच हुनेको संख्या उत्साहजनक नदेखिएपछि उपमहानगरले निर्देशिकामा व्यवस्था भएको विद्यार्थी सिकाइ केन्द्र नै बढी प्रभावकारी हुने ठानेको छ। अघिल्ला वर्षका अनुभवमा नियमित विद्यालय नआउने, कक्षा दोहो-याउने र इन्टरनेट र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री पहुँच नहुने बालबालिकाका लागि यो विधिले राहत प्रदान गर्ने देखिएको उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख खनालले बताए।
निर्देशिकामा समुदाय र विद्यालयमा सहजीकरणका लागि त्यस्ता सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने र १०/१२ जना विद्यार्थीमात्रै सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था छ । बुटवलमा पनि विद्यालयले नियमितरूपमा पहिलेकै जस्तै गरी आमनेसामने भएर कक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने छैनन्।
तर, विद्यालयमा भीड नहुने गरी विद्यालय नजिकमा रहेका बालबालिकालाई भने सिकाइ केन्द्रका रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यसबाट विद्यालयमा कम विद्यार्थी संख्या हुने विद्यालयलाई धेरै विद्यार्थी हुने विद्यालयभन्दा केही सहज हुने देखिएको छ।
बुटवलमा बुटवल माध्यमिक विद्यालय र लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयलगायत केहीले सिकाइ केन्द्र र घरघर पुगेर विद्यार्थी सहजीकरण गर्ने कामको अनुभव लिइसकेका छन्।
उपमहानगरको अनुमानमा नगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतहाराहारी मात्रै विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छन्। यसले एकातिर सहजीकरणका अन्य विधि प्रयोगमा ल्याउन जरुरी देखिएको छ भने इन्टनेट पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
इन्टरनेट पहुँच विस्तार
उपमहानगरभित्र इन्टरनेट पहुँच हुने विद्यार्थी संख्या ५० प्रतिशतहाराहारी देखिएपछि इन्टरनेट पहुँच बढाउने तयारी उपमहानगरले गरेको छ।
उपमहानगरले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र कम्प्युटर पहुँचमा पु¥याउन १० लाख बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा अपुग भए थप गरिने शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट जडान गर्न, इन्टरनेट क्षमता बढाउन र त्यसका लागि आवश्यक बजेट माग गर्नसमेत भनेको छ।
उपमहानगरले विद्यालयका साथै समुदायमा रहेका सरकारी र सामुदायिक संस्थाका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, क्बलजस्ता ठाउँहरुमा निःशुल्क वाइफाइ व्यवस्था गर्न सके त्यसले विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने ठानिएको छ।
भर्ना होइन अभिलेखीकरण
उपमहानगरले अहिलेका लागि विद्यार्थी भर्ना नभनेर अभिलेखीकरणमात्रै गर्ने नीति ल्याएको छ। भौतिक उपस्थित भएर कक्षा सञ्चालन नहुँदासम्मका लागि अभिलेखीकरण गरी विद्यार्थीलाई विद्यालयले सहजीकरण गर्नेछन्। यसकारण विद्यालयले अर्को विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिन पाउने छैनन्। एउटै विद्यालयमा कक्षा बढोत्तरी हुने क्रमलाई शिक्षाको नियममा भर्ना मानिदैन र नियमले त्यसलाई विद्यार्थी भर्ना भनेर शुल्क पनि लिन पाइँदैन।
स्कुल बस चल्दैन, जहाँ छौ त्यहीँ पढ
नगरभित्रका विद्यार्थी सिकाइमा नछुटुन् भन्ने नगरपालिकाले नीति अगाडि ल्याएको छ। कोरोना महामारीको कहिलेसम्म रहने र विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन हुने अनिश्चित भएपछि विद्यार्थी जहाँ छन्, त्यही नै रहेर सहजीकरणमा भाग लिन उपमहानगरले आग्रह गरेको छ।
यसबाट विद्यालय र विद्यालयका शिक्षकसँग सम्पर्कमा रहन, सहजीकरणमा भाग लिन र परिक्षाजस्ता मूल्यांकनमा समेत कठिनाइ कम हुने उपमहानरको बुझाइ छ। नजिकका विद्यार्थीहरू सहजीकरणका लागि विद्यालयमा अभिलेखीकरण हुन आउँदाका बखत ती विद्यार्थीलाई अभिलेखीकरण गरी सहजीकरणमा सहभागी गराउन नगरपालिकाले भनेको छ।
कोरोनाको असरबाट बुटवल उपमहानगरको फरक वडाबाट फरक वडामा रहेका विद्यालयमा पढ्नका लागि जाने विद्यार्थीले नजिकका विद्यालय रोज्ने देखिएको छ।
त्यतिमात्रै नभएर बुटवल उपमहानगरका विद्यालयमा सैनामैना, देवदह, सियारी, सुद्धोधन, सिद्धार्थनगर र ओमसतियालगायत स्थानीय तहबाट पढ्न आउने विद्यार्थी संख्या पनि घट्न सक्ने देखिएको छ।